KOBCINTA STREPTOKARPUS KA SOO ABUURKA IYO QAYBAHA CALEEN: SIDA LOO DOORTO CIIDDA IYO BACRIMINTA, SIDA BIYAHA IYO ROOTING, IYO SIDA LOO QUUDIYO? - SOOSAARKA DALAGGA
Stptokarpus Bright - qurxinta gudaha. Dhamaanba ku saabsan sii kordhaya ubax guriga
Qof kasta oo riyooyin ku leh ubax qurux badan leh oo leh buro qurux badan oo nadiif ah waa in uu keeno streptokarpus. Daryeel iyo beerashada ma keeni doonto dhibaato kasta xitaa bilowga beeralayda ubaxa, laakiin waad ka heli kartaa farxad badan.
Maqaalkani wuxuu baran doonaa sida si habboon loogu koro streptokarpus iyo daryeelka isaga guriga. Iyo sidoo kale inay ogaadaan waxa u horseedi kara daryeelka aan waxba qorin.
Dhirta yaryar waa in lagu dhajiyaa dhar cusub ugu yaraan laba toddobaad ka dib iibsashada. Waxaa lagu talinayaa in la doorto dhir hufan oo loogu talagalay beerto, waxay fududaan doontaa in la raaco horumarinta nidaamka asaasiga ah.
Si streptokarpus loo siiyey ubaxyo badan oo jilicsan iyo si dhakhso ah u kordhaya cagaarka, waa in la koray weelasha gacmeed.
Fogaanshaha badan ee ubaxku waxay si toos ah ugu xiran tahay tirada dhibcaha koritaanka.
Isticmaalidda streptokarpusy da'da yar waxay u baahan tahay daryeel habboon. Waxay marka hore u baahan yihiin in ay dhisaan tiro cagaaran oo ku filan, ka dibna waxay siin doonaan inflorescences qurux badan. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in la gooyo caws ubaxa kuwaas oo aan waqti ku jirin.
Sidee u koraan?
Streptokarpus - warshad jilicsan, Waa mid aad u fudud in la daryeelo isaga, waxa ugu muhiimsan waa in la raaco dhammaan talooyinka daryeelka.
Streptokarpus - warshad iftiin leh, oo u baahan shamuus buuxa. Waa in la siiyaa maalinta 14-saac ee iftiinka. Geeddi ayaa dareensan in uu aad u fiican yahay daaqadaha. Laakiin xilliga qaboobaha, iftiinka macmalka waa in la abaabulo. Bannaanka u khibrad leh waxay ku talinayaan beddelidda nalalka iftiinka qoraxda iyo qalabka xijaabka.
Wixii dhirta doorbiday dhulka iftiin iyo dabacsan. Waxaa lagu talinayaa in lagu daro peat, perlite, vermiculite iyo ubax sphagnum si ciidda. Streptokarpus waxa uu ku faanaa horumarka firfircoon ee nidaamka xididka. Bannaanka u badan ayaa isticmaala isku dar ah peat leh vermiculite ee isku mid ah. Xitaa waxaad dhali kartaa dhirta peat. Waxa kaliya ee lagu hayo maskaxda ku jira waa in kiiskan waraabinta waa in la sameeyaa inta badan marar badan, haddii kale peat wuxuu si degdeg ah u rogaa gogo 'dabacsan oo aan si fiican u nuugin qoyaanka.
Ubax shimbireedka waa mid fiican, laakiin waa maxay quudinta?
Digniin! Waxaa fiican in la isticmaalo Bacriminta nitrogen-fosfooraska leh content nitrogen ugu weyn. Bacriminta noocan oo kale ah waa in lagu qasi karaa biyo nus. Waxaad u baahan tahay inaad quudiso toddoba cisho oo kasta, mar kasta oo la yareeyo qiyaasta bacriminta.
Ubaxyada si habboon loo bacrimiyey oo si dhakhso ah u koraan mass cagaaran, ka dibna Bloom si fiican.
Streptokarpusu waxay u baahan tahay waraabin dhexdhexaad ah. Way ka fiican tahay in la qalajiyo marka loo daadiyo sababta oo ah geedka ayaa si joogto ah u dulqaadanaya abaarta. Waraabinta waa lagama maarmaanka u ah si joogto ah iyo badanaa, laakiin sida habka in lakabka sare ee dhulka qalaji karaa. Waxay dhici kartaa in streptokarpus uu noqdo mid aan la jilcin sababtoo ah la'aanta qoyaanka. Markaas waxaad u baahan tahay inaad abaabuliso biyo 2-3 jeer labadii saacadoodba mar.
Marka dhirta ay leedahay qoyaan aad u badan, nidaamka xididka ayaa qudhmi kara. Streptokarpus duufaan kiiskan wuxuu bilaabmaa inuu baxo, caleemuhana waxaa lagu daboolaa meelo cawlan. Badbaadi oo keliya kexeyste digsi cusub oo leh ciid cusub.
Warshadu waa mid aad u fiican mashiinka badan. Marka xigta ubaxa waxaad ku dhejin kartaa suugo biyo ah, sidaas darteed hubinta qoyaanka sare ee uu u baahan yahay.
Streptokarpus - ubax thermofilic ah. Heerkulka wanaagsan ee koritaanka xagaaga waa 23-25 ​​digrii. Haddii heerkulku sareeyo, dhirku wuu engegi doonaa. Sidaa darteed, saacadaha habeenkii waxay u fiicantahay in laga soo saaro ubax ka soo baxa qorraxda tooska ah. Jiilaalka waxaa loo tixgeliyaa waqtiga nasasho ee streptocarpus, sidaas darteed waa in loo wareejiyaa meel qabow leh heerkul ah 14-15 digrii. Dhererka maalintii lagu taliyey waa 7-8 saacadood.
Streptocarpus waa ka xun yahay dhibicda heerkulka leh, sidaas darteed waxaad u baahan tahay inaad sameysid heerkul joogto ah inta u dhaxaysa 22-25 digrii.
Marka waraabiyo waa in aysan u oggolaanin biyo inay ku dhacaan caleemaha ama luqunta xididka geedka, Sidaa daraadeed, qaabka ugu fiican ee waraabinta waa in dhererka biyaha lagu daro dhowr daqiiqadood.
Wixii beeraha wanaagsan ee streptokarpus ka soo abuurka ah waa lagama maarmaan in la abuuro qoyaan badan qolka.
Inta lagu jiro xilliga kuleylka, qoyaanka qolka ayaa hoos u dhacaya, way adagtahay in la abuuro shuruudaha lagama maarmaanka ah. Sidaa daraadeed, beeralayda ayaa ku fashilmay wax yar oo khiyaano ah. Waxay ku riday biyaha kululeeyaha biyaha. Iyo qaar ka mid ah xitaa abaabulo ciriiriga. Dhammaan tani waxay caawineysaa inay abuurto microclimate loo baahan yahay ubaxyada.
Caawimaad! Waa in laga ilaaliyaa qorraxda tooska ah. Xaaladda ugu fiican waa isticmaalka iftiinka macmal. Waxaad dhisi kartaa boodbood yaryar oo leh nalal dhisid.
Video on abuurka streptocarpus taranta:
Ku dhaji xaashida xaashida
Carro waa in la doortaa iftiin, neefsasho, aan nafaqo lahayn iyo qoyaan si fiican u ilaalisa. Cuntada dheecaanka leh ee streptocarpus ayaa sidoo kale aad u muhiim ah.
Marka kororka streptokarpus ka soo baxo caleen, waxaa muhiim ah in la siiyo xaashiyo leh qoyaan ku filan. Weelka waa in la dhigaa meel banaanka ah. Waa lagama maarmaan in la abaabulo aqalka dhirta lagu koriyo, ama ku dabool bacda bac ah.
Ha ku qoyin ciidda haddii kale gabal caleen ah oo qudhmi. Iftiin aan fiicneyn ama iftiin aad u dhalaalaya waxay dhalin kartaa kor u kaca qaybta, koritaanka xun ee "carruurta." Marka xaaladaha ku habboon la abuuro, ilmuhu wuxuu ka muuqan doonaa dhinac walba dhinaciisa 4-6 toddobaad.
Ka dib marka caleemuhu noqdaan wax ka badan 3 cm, waxaad bilaabi kartaa inaad ku beeri kartid kontaynarro yar yar. Waxaa muhiim ah in lagu badbaadiyo xaaladaha aqalka dhirta lagu koriyo marka hore. Muddo bil gudaheed, caruurtu waa inay si fiican u qaadaan oo ay u kortaan koritaan firfircoon, oo si tartiib tartiib ah ayey uga soo bixi karaan aqalka dhirta lagu koriyo.
Video on mawduuca, dhalmo qaybta streptocarpus ee xaashida:
Sida loo aaso warqad
Wixii rootida caleemaha caleen waxay qaadanayaan illaa laba toddobaad. Taas ka dib, caruurtu waa inay u muuqdaan 1.5-2 bilood.
Mid ka mid ah xididka hal ama laba carruur ah ayaa laga yaabaa inuu muuqdo. Ka hor inta aanad ilmaha ku dhejin dhar kala duwan, waa inaad sugto iyaga si ay ugu koraan ugu yaraan 2 cm.
Waxaa fiican inaad ku fariisato koobabka la tuuri karo ee stogrammovye. Wixii beerista carruurta, waxaa lagama maarmaan ah in la abuuro aqal dhirta yaryar ah, si tartiib tartiib ah loogu isticmaalo xaaladaha qolalka iyadoo la duubayo.
Kala saarista carruurta xaashidan waxay abuuri kartaa dhibaatooyin, sababtoo ah lugahooda khafiifka ah ayaa aad u nugul waana fududahay inay waxyeello u geystaan. Taas ka dib, caruurtu waxay u baahan yihiin in lagu daaweeyo xidid iyo daadad, iyada oo aan qoto dheereynin xididka xididka.
Streptokarpus ma u dulqaadan kartid, waxay keeni karaan cudurka ubaxa iyo dhimashadiisa. Sidaa darteed, doorashada ee goobta warshad waa in la qaato si aad u dhab ah.
Sida ugu dhakhsaha badan caleemaha ugu horeeya bilaabaan inay sameeyaan, geedo u baahan tahay in ay bilaabaan inay tababaraan heerkulka qolka. Si arrintan loo sameeyo, samee hawo-qaadasho, mar walba kordhiso wakhtiga lagu kharash gareynayo dibadda aqalka dhirta lagu koriyo.
Kusii koowaad ayaa lagula talinayaa ka dib muuqaalka caleemahaas.
Caawimaad! Cuntadu waa inay ku beddesho dhirta dherer weyn, iyaga oo u dejiya si aanay u faragelin kobaca kale.
Beerta khibrad leh waxay ku talinaysaa in la beero caleemo caleen ah oo ku yaal boodh yar. Ha yeelin godadka hawo-qaadashada. Waxaad u baahan tahay inaad hubiso in caleemuhu aysan taaban xirmo, waxaad ku dhisi kartaa taageerooyin gaar ah. Si aad u dhigo aqalka dhirta lagu koriyo meel diiran oo si wacan u iftiimaya.
Streptocarpus-ka guriga ayaa laga qaadi karaa cudurrada iyo cayayaanka. Daryeelka aan sharciga lahayn iyo ku xadgudubka xeerarka beerashada waxay sababi kartaa dhibaatooyinkan.
Haddii aysan jirin qoyaan ku filan qolka, dhirta ayaa laga yaabaa in ay ku raaxaystaan. Cudurkaan wuxuu keenaa jeermiska qallajinta. Si loola dagaallamo dulin, waa lagama maarmaan in la isticmaalo wakiilada cayayaanka.
Ku guuldareysiga inaad u hoggaansanto heerarka qoyaanka waxay bilaabi kartaa qadhaadh. Waxaad u baahan tahay inaad la dagaalanto Aktely.
Qoyaan xad dhaafka ah ee ciidda waxay sababi kartaa xayawaanka. Iyada oo cudurkan, dhirta iyo ciidda waa in lagu daaweeyaa kiimikada. Sidoo kale waxay u baahan tahay bedel dhamaystiran oo ciid ah.
Haddii shuruudaha aan la raacin, dhirta ayaa laga yaabaa inay ku dhacdo caarada caarada. Xaaladdan oo kale, shabakad caarad ayaa ka muuqata caleemaha, cawshuna ubaxaan si dhakhso ah. Habka xakameyntu waa cayayaan.
Streptokarpus waxay ku farxi kartaa isha ilaa sanadka oo dhan. Noocyo badan oo ah nooca hybrid ayaa suurtagal ah in ay doortaan dhirta aad jeceshahay midab la xasuusto. Daryeelka saxda ah ee daryeelka ubaxa waxay ku kordhineysaa abuurista ubax badan oo dhaadheer.